Kwimizuzu nje engephi, uluhlu lwethu belusebenza kwiindawo ezimbalwa kwaye sifumana izilumkiso nge-imeyile njengoko abanye beya kuphila. Ngelixa singalindelanga ukuba nonogumbe omkhulu weshishini njenge-arhente yokukhangela kwasekhaya, kubalulekile ukuba ishishini lethu lidweliswe ngokuchanekileyo kwaye lifumaneke kuzo zonke ezi ndawo. Ngokukodwa ngokukhula okumangalisayo kweenkonzo ezisekwe kwindawo kwizixhobo eziphathwayo. Sifuna ukufunyanwa ekuhlaleni kanye njengakwilizwe liphela. Ukuba uyishishini lokuthengisa, kunyanzelekile!